अप्रेशन गरी बच्चा जन्माउने महिलाले यस्ता कुरा ध्यान दिनुहोस् ,लापर बा ही गरे ज्या न जान सक्छ ! – Khabaarpati
October 19, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on अप्रेशन गरी बच्चा जन्माउने महिलाले यस्ता कुरा ध्यान दिनुहोस् ,लापर बा ही गरे ज्या न जान सक्छ !
बच्चा जन्माउँदा गरिने ‘सीजरियन सेक्सन डेलिभरी’ (अप्रेशन गरी बच्चा जन्माउने) लाई लिएर विभिन्न्न भ्रम सुन्न पाइन्छ, । प्रसूती तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा शितल अग्रवालका अनुसार सीजरियन सेक्सनको भ्र म र वास्तविकता यस्ता छन् स्
१‍. पहिलो बच्चा जन्माउँदा अप्रेशन गरिएको छ भने दोस्रो बच्चा जन्माउनका लागि तीन वर्षको अन्तर राख्नु राम्रो हुन्छ । तीन वर्ष भन्दा कम अन्तरमा बच्चा जन्माउँदा फेरि अप्रेशन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले खत रा बढाउँछ।
३. अप्रेशन पछि केही आमाहरुमा तत्काल स्त न पान गराउनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । अप्रेशन लगत्तै वा सोही दिनदेखि स्त नपान गराउँदा कुनै असर पर्दैन।४. अप्रेशन गरेको भोलिपल्ट अर्ध तरल पौष्टिक भोजन ग्रहण आग्रह गरिन्छ । चिल्लोयुक्त तरल पर्दाथ खानु हुँदैन । तेस्रो दिनदेखि आइरन र फाइबरयुक्त तरल खानेकुरा खान सकिन्छ । ताजा फलफुल, सागसब्जी, खानुपर्छ । डिहाइड्रेसनबाट बच्न पानी वा तरल पदार्थ प्रशस्त खानुपर्छ । सन्तुलित पोषण खानुपर्छ जसले अनावश्यक रुपमा तौल बढ्न दिदैन।
५. डेलिभरीपछि आफ्नो र शिशु दुबैको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्छ । आफू लाई चिसो र एल र्जीबाट बचाउनु पर्छ । हाच्छिँउ आउँदा शल्यक्रिया गरेको स्थानमा अ सर पर्नसक्छ । अप्रेशन गरेको केही दिन एकदमै सिधा वा तन्किएर उभिनु हुँदैन । कोल्टे फेर्नु पर्दा पनि परिवारका सदस्यको सहयोग लिनुपर्छ । धेरै आराम र प्रर्याप्त मात्रामा सुत्ने गर्नुपर्छ।